Brezila, rakitra tafaporitsaka momba ireo olona an-jatony lazaina ho mpankahala fasista · Global Voices teny Malagasy
Hitan'ireo mpanoratra kaody ny fomba azo antoka hijerena ilay lisitra
Voadika ny 24 Novambra 2020 3:35 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, русский, Ελληνικά, Español, English, Português, Français, українська, English
14 Jona, hetsipanoheran'ireo mpankahala fasista tao Porto Alegre, tany atsimon'i Brezila. Sary an'i Maia Rubim tao amin'ny Benedictas Fotocoletivo/nahazoana alàlana.
Tamin'ny volana Jona lasa teo, an-jatony ireo olona tao Brezila no voatonona anarana – tsy nieràna tamin'izy ireo – tao anaty lisitra entina manondro ireo “mpankahala fasista”. Ny iray tamin'ireny lisitra ireny, izay niparitaka tao amin'ny WhatsApp, dia namoaka ampahibemaso ny mombamomba manokana ny olona (doxxing) toy ny anarana, ny sary ary ny adiresy. Ny iray hafa dia parlemantera avy amin'ny elatra havanana no nanangana azy, nampian'ireo mpanjohy azy, ary tsy fantatra mazava tsara hoe torohay manokana toy ny ahoana no ao anatiny.
Ny torohay nabaribary
Tany am-piandohan'ny Jona, lisitra PDF iray misy pejy 900 no niparitaka tao amin'ny Whatsapp. Rehefa nanokatra azy io ry zareo Breziliàna, an-jatony tamin-dry zareo no nahita tao ny anarany, ny sariny, ny mombamomba an-dry zareo ety anaty media sôsialy, ny adiresy, ary laharana finday vitsivitsy. Ankoatry ny famoahana ny mombamomba manokana ny olona, faritan'ilay antontankevitra ho toy ny “mpankahala fasista” ireo voasoratra tao anatin'ilay lisitra. Hatreto, tsy misy olona mahafantatra izay nanangona ireo rakitra ireo, no sady tsy fantatra izay tena tanjona ao ambadik'izany.
Ny “Doxxing” dia fomba fanao iray famborahana ny mombamomba manokana ny olona iray nefa tsy nieràna taminy, entina hampihorohoroana na handrahonana azy. Raha mora alaina na mora hita ny sasantsasany amin'ireny torohay ireny, toy ny sary nalefan'ilay tompony ihany tao amin'ny mombamomba azy ao amin'ny media sôsialy na ny pejiny, ny tanjon'ny ‘doxxing’ kosa dia ny handrahona ilay olona kinendry sy ny hila vaniny aminy.
Misy ny sahoan-dresaka nivezivezy tao amin'ny media sôsialy hoe ireo olona tafiditra tanaty lisitra ireo dia mpikambana avy amin'ny hetsiky ny elatra havia, na dia tsy misy porofo mazava afaka manamarina izany aza. Profesora Lola Aronovich, avy ao amin'ny Departemanta fianarana Teny Vahiny ao amin'ny Anjerimanontolo Federaly ao Ceará (UFC) nibitsika hoe ny ankamaroan'ireo anarana dia tao amin'ny Facebook no nalaina “Zavatra niaingan'ilay olona izay nanangana io lisitra io ny endrika ivelany (tombokavatsa, tevika, sns…),” hoy ny nosoratany.
Mpanao lalàna no nanangana ny lisitra faharoa
Andro vitsy taty aoriana, nisy lisitra iray faharoa, tsy nisy hafa tamin'ilay voalohany. Ny solombavambahoaka Douglas Garcia, mpikambana iray voafidy ao amin'ny antenimiera ao an-toerana, tao amin'ny Fanjakan'i São Paulo, avy amin'ny antoko sôsialy liberaly (PSL) fatra-pifikitra amin'ny nentindrazana, no niteny fa nanao ity lisitra faharoa ity.
Tao anaty lahatsary Twitter noraketin'ity parlemantera mpomba an'i Bolsonaro ity, hita mampivezivezy ny rantsan-tànany eo ambony antontan-taratasy matevina iray i Garcia. Lazainy fa naharay anarana teo anelanelan'ny 700 hatramin'ny 1.000 avy amin'ireo mpanjohy azy ao amin'ny media sôsialiny izy.
Nataon'i Garcia ho fahatra ilay fanambaràna vao haingana nataon'ny filoha amerikàna Donald Trump momba ny fikasàny hanondro ho mpampihorohoro ny hetsika Antifa, fiteny manamaivana iray ampiasaina hanondroana ireo hetsika sy vondrona avy amin'ny hery ankavia mpankahala fasista. Ity fiteny ity (Antifa) dia fanafohezana ny hoe “anti-fascist”, ary ireo mpikatroka Antifa dia nandray anjara tamin'ireo hetsika fanoherana ny fasista tao Etazonia. Nanome toky ilay parlemantera fa handefa io listra avy aminy io ho an'ny Masoivoho Amerikàna sy ny polisy mba hanaovana fanadihadiana an'ireo olona ao anatiny sy izay fifandraisan-dry zareo amina “asa fampihorohoroana”.
Lasa fantatra amin'ny hoe “failo misy ny mpakahala fasista” ireo antontankevitra roa ireo — ilay iray hitan'ny daholobe ao amin'ny WhatsApp sy ilay iray nataon'i Garcia.
Nanomboka nino ny olona ao amin'ny media sôsialy fa iray ihany ary tsy misy hafa ilay lisitra voalohany sy ilay faharoa. Ireo mpanao lalàna avy amin'ny hery ankavia niampanga an'i Garcia ho nanàla baraka sy nanitsakitsaka ny fiainana manokana ka nanoro hevitra an'ireo olona rehetra ao anatin'ny lisitra mba hivondrona hanomana ny fiarovantenan-dry zareo araka ny lalàna.
Nandritra ny antso iray tamin'ny WhatsApp niarahana tamin'ny Global Voices, nanamafy i Garcia hoe hafa mihitsy ny lisitra avy aminy. “Tsy misy anarana vehivavy ao anatin'ilay ahy ary mahakasika fotsiny ireo olona avy ao amin'ny fanjakan'i São Paulo irery ihany,” hoy izy. Nohazavainy ihany koa fa ireo anarana nangoniny dia tsy natao ho fanta-bahoaka. Fa tetsy ankilan'izay, nanamafy i Garcia fa ilay failo dia nalefany ho an'ny Polisy Federaly sy Sivily. “Asako ny manome habaka malalaka iray ao amin'ny biraoko handraisana fitarainana. Rehefa nahita olona nanimba ny fananambahoaka na fananan'olona manokana aho nandritra ireo hetsipanoherana ny fasista, dia tsy maintsy nihetsika: Heloka bevava izany,” hoy izy.
Taorian'ny hetsika nataon'ireo fikambanana mpanohitra fasista, nipoitra avy amina klioba mpilalao baolina kitra, tany aminà tanàna 15 raha kely indrindra nanerana an'i Brezila, no nangonin'i Garcia ireo rakitra natolony. Ny 1 Jona, an'arivony maro ireo olona nanao diabe teo amin'ilay lalàmbe migodana ao São Paulo ho valinkafatra ho an'ny mpomba an'i Bolsonaro, fanoherana ireo mpanao fihetsiketsehana tsy tia ny fihibohana ary nameno ny Avenida Paulista isankerinandro tamin'ny May na teo aza ny valanaretina Covid-19.
Hatramin'ny 8 Jona dia nisy ny fanadihadiana nosokafana tamin'ny fomba ofisialy momba ilay parlemantera mpomba an'i Bolsonaro, nampangaina ho manao toetra tsy mendrika ny fitantanana, noho ilay lisitra natsangany. Mety ho voaendaka amin'ny toerany izy raha hita fa meloka. Mino ireo mpanao lalàna avy amin'ny mpanohitra fa miezaka ny handemy ireo mpikatroka i Garcia, ka izany no nitakian-dry zareo hanaovana io fanadihadiana io. Na dia i Garcia aza no nandrafitra ilay lisitra, dia milaza ny tenany ho mpankahala fasista koa anefa izy.
Fitaovana iray hisorohana ny tsy hiparitahan'ny torohay tafaporitsaka bebe kokoa
Tsy dia betsaka nanao fitarainana momba izany tety anaty tambajotra ireo olona voatanisa ao anatin'ilay lisitra hitan'ny rehetra, noho ny tahotra ny mety vao mainka hielezan'izany kokoa. Lucas Lago, “developer” iray ao amin'ny sehatra Project7c0 dia nahita marobe tamin'ireo namany velon'ahiahy rehefa nivoaka ho fantatry ny daholobe ireo lisitra roa ireo. ” Nozarain-dry zareo tety anaty aterineto ilay lisitra ho an'ny daholobe mba hahafahan'ny olona hafa mijery ny anaran-dry zareo,” hoy i Lago nandritra ny resaka Skype nifanaovany tamin'ny Global Voices.
Taty aoriana izy nifandray tamin'ilay namany mpiaraka manao kaody aminy, Eduardo Cuducos, mba hanampy azy hamorona fitaovana iray afaka hisorohana ny tsy iparitahan'ny torohay manokana mombamomba ny olona iray, no sady ahafahan-dry zareo mijery raha toa ka ao anatin'ny lisitra ry zareo. Aminy, zavadehibe ny manana fomba iray azo antoka ahafantarana izay ao anaty lisitra. Raha mbola azo jerena any ambadimbadika any ety anaty aterineto ilay lisitra PDF, miaraka amin'ilay fitaovana novokarin-dry zareo, notadiavin'i Lago sy Cuducus ny hanakelezana ny fiparitahan'ireo torohay manokana momba ny olona ao anatin'ilay lisitra.
Izay rehetra fomba fizaràna torohay manokana momba ny olona [ety anaty tambajotra] ka manasokajy ny olona, dia tsy hoe fotsiny saropady, fa tsy ara-dalàna. Henjana ny toedraharaha aty Brezila ary mihenjan-droa ny tady, manokatra varavarana io hametrahana ny olona reheta ho tandindonin-doza. Tsapako fa adidiko ny mihetsika manao zavatra mba hahafantaran'ny olona momba izay loza mitatao aminy raha toa ka ao anaty lisitra ry zareo. (…) [Ny fizaràna ilay lisitra ety anaty tambajotra dia] mety hiafara amin'ny vao mainka famotehana misimisy kokoa raha toa ka tsy atao amim-pisainana fatratra. Tokony handray ny zavatra rehetra amin'ny fahaizana mandinika ny olona tsirairay.
Nambaran'ilay “developper” ihany koa fa marobe ireo mpampiasa no nifandray taminy nangataka torohevitra araka ny lalàna, rehefa avy nahita ny anarany tao anatin'ilay lisitra. “Nalefanay ry zareo hifandray amina mpisolovava na ONG izay mijery manokana ny resaka angondrakitra naboraka, mba hahazoany tohana tsara kokoa,” hoy izy. Tsy hain-dry zareo hoe olona firy no nampiasa azy io satria tsy mitahiry ny mombamomba ireo mpampiasa ireo ry zareo mba hiarovana ny maripamantarana azy ireny.
Ho an'i Lago, kihon-dàlana iray goavana ny nahitàna ity fitaovana ity hatramin'ny namoahana ho fanta-bahoaka ilay lisitra iray voalohany. “Nahafahan'ireo olona voakasik'izany nahafantatra misimisy kokoa momba ny toedraharaha mahazo azy izy io”, hoy izy.